Muri pano: musha / Technology News / famba / Iyo Sony Xperia Pro-Ini ndinogona kupfura 4K/120, yakanangwa kune vanobudirira uye vanogadzira
Sony yakazivisa inotevera mumutsara wayo wehunyanzvi kutora mafoto / videography centric smartphones, uye inonzi Xperia Pro-I.
Munzira dzakawanda ndiyo Sony Xperia 1 III - iyo yakatangwa kutanga kwegore rino - asi nemuviri mutsva uye kamera yakasimudzwa zvakanyanya uye inodziya system.
Iyo yekutanga kamera kuseri inoratidzira yakafanana 1.0-mhando Exmor RS sensor inoshandiswa mune RX100 VII kamera, asi "yakagadzirirwa smartphone".
Kune iwo mafeni ekufungidzira, iyo sensor ine 2.4µm pixel pitch, RAW 12-bit kupfura uye kamera ine mbiri mechanic f2.0/f4.0 aperture.
Sezvaungafungidzira, chinangwa ndechekuunza mhando yemufananidzo iwe yauchanetseka kuwana neimwe smartphone kamera, ine bokeh uye yakaderera mwenje kuita iwe haungaite kuti uwane nemamwe mafoni.
Iyo sensor inoratidzira 315 chikamu-yekuona AF mapoinzi, ayo anovhara makumi mapfumbamwe muzana efuremu uye - semakamera ayo akazvitsaurira - anoratidza epamberi autofocus kugona kusanganisira chaiyo-nguva ziso AF uye chaiyo-nguva yekutevera.
Inobatanidza mamwe makamera maviri kumashure, uye ese ari matatu ane lenzi akaputirwa neZeiss T * anti-reflective coating, nepo kamera huru inoshandisa Zeiss Tessar optics.
Iyo huru sensor ndeye 24mm yakafara yakaenzana, uye inobatanidzwa ne16mm ultrawide uye 50mm telephoto pamwe ne3D ToF sensor. Ese ari matatu ane 12-megapixel resolution.
Zvakare nekutsvaga kuunza kusaenzana kuchiri kuita, iyo Xperia Pro-Ini inodawo kutonga musika wekutora vhidhiyo, ichipa 4K resolution yekurekodha kusvika kune inokatyamadza 120 mafuremu-pasekondi.
Chii zvakare, iwe unozogona kushandisa iyo Ziso AF uye chinhu chekutevera kugona kana uchipfura vhidhiyo. Uye kune yekuwedzera mhando yeaudio, kune matatu maikorofoni, imwe yacho iri monaural maikorofoni yekuwedzera kujeka kwekutaura kwekutaura panguva yekudhirowa, nepo mamwe maviri achiunganidza ambient ruzha mu stereo.
Nekuti yakanangana nenyanzvi dzevhidhiyo uye mafoto, kune inyanzvi yekutora maapplication. Asi hazvireve hazvo kuti zvakaoma kushandisa iwo manyorerwo ekudzora.
Iyo itsva Videography Pro app inoita kuti iwe nekukurumidza uye nyore kugadzirisa zvigadziriso senge kutarisisa, chena chiyero, kuratidzwa uye nezvimwe, pasina kutarisana nezvakawanda zvakaoma sarudzo. Kana zvirinani, ndizvo zvazvinoreva.
Kubva pamaonero ekugadzira, inoita seyakafanana neXperia 1 III kubva kumberi, asi chassis uye furemu zvakagadziridzwa, uye inosanganisira ese ari maviri buri retambo uye hombe, yakashongedzwa yekuvhara bhatani.
Kana ari mamwe mafungidziro, izvo zvakangofanana neXperia 1 III. Izvi zvinosanganisira Snapdragon 888 processor, 4K 120Hz OLED kuratidza uye 4500mAh bhatiri.
Pane kutarisa kukuru pamhando yekuteerera zvakare, nerutsigiro rwewaya uye isina waya Hi-Res odhiyo macodecs.
Iyo Sony Xperia Pro-Ini ichatanga kutengeswa kutanga kwaZvita uye inodhura £ 1,599 kuUK.
Sony Mobile ichapawo Vlog Monitor inobatanidza nefoni uye inokutendera kuti uzvitore iwe pachako nekamera huru. Izvo zvinoenda kutengeswa panguva imwe chete ye £169, pamwe neyekutanga anti-microbial dehwe kesi ye £69.